SHOCK ABSORBERS Abakhiqizi nabaphakeli - China SHOCK ABSORBERS Factory
Isitolo esidayisa yonke impahla Front Right Right Pneumatic Air Bag Shock Absorber-Z11050
I-Twin Tube Shock Absorber I-twin tube design ine-tube yangaphakathi eyaziwa ngokuthi i-pressure tube kanye ne-tube engaphandle eyaziwa njenge-reserve tube. Ishubhu langaphandle yindawo yokugcina uwoyela. Ngenkathi induku ihambela phezulu naphansi, uketshezi lududulwa / ludonswe nge-valve eyisisekelo luye ngaphakathi / ngaphandle, kushubhu ebekelwe. I-valving ku-piston isebenza kuphela ngenkathi icwiliswa emafutheni. Ukushaqeka kweTangrui kwenziwa ngoyili owenele ukugcwalisa ithubhu ebekiwe, kungakhathalekile ukuhamba okuthusayo noma isikhundla. Ishubhu lengcindezi lihlala ligcwele ...
Umshini Wokumiswa Kwangemuva Wokumiswa Kwomoya Kwe-Cerato- Z11051
Ngokushayela kwansuku zonke nokusindayo emgwaqeni ngokufanayo, ama-shock absorbers agcina i-Jeep yakho isebenza kahle futhi ivikela ukumiswa kwayo. Noma ngabe udinga ukufaka okunye esikhundleni, ukukhuphula izinga noma ukulungiswa ngokuphelele, iTangrui inikezela ngothuko olufanele cishe noma yimuphi unyaka kanye nemodeli yeJeep emakethe. Okuthengiswa Kakhulu Kuphela Lapha Njengo-jeeper, uyazi ukuthi ubunjiniyela bekhwalithi babala ukuhamba okuhle kakhulu, futhi nathi siyakwenza. Okushintshiwe kwethu njengengxenye yokushaqeka kuvela kubakhiqizi abaphezulu abavela ku-Pro Comp Suspension naseRubicon Express t ...
I-High Quality engemuva Kwesobunxele Yokumiswa Kokumiswa Kwezimoto Zokushaqeka Kwemoto-Z11054
IShock Absorber iqinisa ukuhamba kwentwasahlobo okunyakaziswa ngumthelela. Intwasahlobo iyaqhubeka nokungena futhi inwebe njengoba kusetshenziswa amandla. Kuyadingeka ukukhawulela ukuhamba kwentwasahlobo ngokunethezeka kokugibela kwabagibeli. IShock Absorber ilawula ukuhamba kwentwasahlobo ngokusebenzisa ukumelana okwenziwe ngokudlulisa uwoyela emgodini omncane we-valve. ■ I-Multi Disc Valve System Damping force contol ikhiqizwa ngejubane, inani, njalonjalo wokudlulisa uwoyela ...
Ukumiswa Kwezimoto Okumisiwe Okumnyama Okuthungatha Umshini-Z11057
Ukumiswa System Cabin Shock Absorber Oem- Z11063
BENZANI ABATHATHI BOKUTHUKA? Iziduli ezishaqisayo ziyizinto zokuphepha ezibucayi ezingathinta ukugqokwa kwamasondo, ukuqina, ukubopha amabhuleki, ukudlidliza, induduzo yomshayeli, nempilo yezinye izingxenye zokuqondisa nokumiswa. Imisebenzi Ebalulekile ethi Shocks Enza Ukulawula ukunyakaza kwentwasahlobo Ama-Shocks asebenza nohlelo lokumiswa kweloli lokuhweba ukugcina ukuthintana nomgwaqo ngokulawula ukunyakaza kwentwasahlobo. Kuvikela iziphethu nezikhwama zomoya Ukudlidliza kusebenza neziphethu zamaloli ezentengiselwano - uma umuntu ebuthakathaka, kuzo ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Car Front Shock Absorber-Z11064
I-Oem Shock Absorber Autoparts Ye-LEXUS-Z11066
ITangRui Spring Shock Absorber-Z11068
Ngaphambili Ukumiswa Komoya Okumisiwe KweCerato-Z11052
I-High Quality engemuva kwesokudla sokumiswa kokumiswa kwekhithi yezimoto ezishaqisayo-Z11053
I-Rubber ye-Shock Absorber, I-Bolt Shock Absorber, Iqhubu langaphambili Lokuqondisa, Ihabhu Lesondo, Isifaki seHood Shock, ITire Ball Joint,